China EIR SPC vinyl Flooring mpanamboatra sy mpamatsy | Karlter
Embossed in Register (EIR) Flooring miaraka amin'ny Realfeel Technology
1. Anti-slip, Anti-agila, avo lenta anti-abrasion ary anti-bakteria
2. Fihenan'ny feo sy fihenan'ny tabataba
3. Elastika avo lenta, fiarovana avo
4. Mora apetraka
5. Vidina fikojakojana ambany, tsy mila savoka
6. androm-piainana lava kokoa
Anarana Vinyl Flooring (EIR SPC gorodona)
Ny hatevin'ny birao 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6mm na namboarina
Manaova hatevin'ny sosona 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm toy ny mahazatra
Fametrahana Kitiho ny rafitra, (Unline / Valinge)
(Na namboarina) 7 "* 48" 180 * 1220
Inona ny gorodon'ny EIR (Embossed in Register)?
Betsaka ny safidy amin'ny gorodona azo atao ankehitriny izay mety ho sarotra ny misafidy ny gorodona tonga lafatra ho an'ny tranonao na ny orinasanao. Ny fandrosoana ara-teknolojia dia ahafahana manana gorodona manana endrika tsara sy fahatsapana hazo voajanahary - saingy tsara kokoa. Ny gorodona EIR Vinyl dia manatsara ny fombanao, saingy mora kokoa ny fikolokoloana, maharitra sy azo antoka ho an'ny fianakavianao sy ny biby fiompinao.
Ny fahalalana bebe kokoa momba ireo karazana gorodona, ny fomba fanamboarana azy ary ny tanjaka sy ny fahalemen'ny karazana tsirairay dia tokony hanampy rehefa mandray fanapahan-kevitra. Rehefa dinihina tokoa, raha manapa-kevitra ny hanova ny lokon'ny efitrano ianao dia mora ny mandoko.
Tsy mitovy ny Flooring Vinyl henjana rehetra!
Ny gorodona vita amin'ny vinine dia lafo indrindra izay azo ampiasaina amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny gorodona vita amin'ny vinina mora vidy, tsy dia vita firy ka hatrany amin'ny gorodona vita amin'ny lamba vita amin'ny vinina.
Ny embossing dia azo ampiana mandritra ny fizotran'ny fanafanana. Ny takelaka metaly misy lamina iray dia voatsindry ao anaty sosona, mamorona mitaingina mitovy amin'ireo tendrony amin'ny vato na hazo. Ny firafitra dia ampiana amin'ny sosona sary fisaka izay mety mifanaraka na tsia amin'ny voan'ny sarin'ny hazo na vato tena izy.
Embossed In Register (EIR): Ny gorodona Realfeel EIR no gorodona avo lenta indrindra - ilay diamondra fanantenan'ny gorodona vita amin'ny vinkazo lafo vidy. Ny firafitra dia milahatra tsara mifanaraka amin'ny hazo aseho amin'ny sosona sary.
Teo aloha: kitiho ny gorodona vinyl hidin-trano
Manaraka: lakaoly ambany gorodona vinyl